Ka PS2 Memory Card soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray Files
PS2 Memory Card Recovery, ka PS2 Memory Card Ladnaansho tirtiray ama u Khasaaray Files
1 Waxaan Recovery tirtiray PS2 Memory Card gudbin kartaa?
Waxaan tirtiray kulan runtiina waan doonayaa in dib. Ma suurogalbaa igama suurowdo inaan ka soo kabsado aan kaadhka xusuusta PS2? Walba oo soo jeedinaya in la aad u badan jeclaan lahaa.
Haddii aad kaadhka xusuusta PS2 xirmaan your computer oo waa la tusay karaa sida warqad drive ah, waxaana suurto gal ah in aad soo kaban karto, files tirtiray ka kaadhka xusuusta PS2 la software-saddexaad. My talo waa Wondershare Data Recovery ama Data Recovery for Mac .Waxa waa run ahaantii wax ku ool ah inay ka soo kabsadaan xogta kaadhka xusuusta PS2 la Wondershare Data Recovery, ma files arrinta lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, formatting ama xitaa baadi nidaamka.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah inuu ka soo kabsado xogta laga aad kaadhka xusuusta PS2. Si aad u hesho natiijo ka fiican soo kabashada, fadlan ha ka dhigay wixii macluumaad cusub oo aad kaadhka xusuusta PS2 marka aad ka heli files yihiin laga badiyay.
Kabsado files ee 550+ qaabab ka kaydinta computer aad si deg deg ah, si nabad ah oo si buuxda.
3 Hababka Recovery inuu kaa caawiyo inaad ka soo kabsado files lumay hoos xaalado kala duwan
Taageerada kabashada xogta ka qashinka, drive adag, kaadhka xusuusta, flash drive, camera digital iyo camcoders
Free Download Free Download i
2 Qabtaan Recovery File PS2 Memory Card ee 3 Talaabooyinka
Halkan waxaan ku qaadan Wondershare Data Recovery for Windows sida tusaale. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac ah.
Tallaabada 1 Dooro Mode Recovery ah inuu ka soo kabsado Faylal ay ka PS2 xasuusta Card
Tan iyo markii aad doonaysid in aad ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta PS2, waxaad dooran kartaa "File Recovery Mode lumay" aad u bilowdo hawsha.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado files lumay ay sabab u tahay sababo kale, waxa kale oo aad isku dayi kartaa kale 2 hababka.
Tallaabada 2 Dooro PS2 Memory Card si Sawirka Faylal ay ka tirtiray
Halkan barnaamijka qor doonaa oo dhan qoruhu of your computer iyo sidoo kale qalabka lagu kaydiyo xiran, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah oo aad kaadhka xusuusta PS2 oo guji "bilow"
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay Faylal ay ceshan PS2 Memory Card Files Xulo
Scan ka dib, dhammaan faylasha helay in aad kaadhka xusuusta PS2 oo dhan lagu qori doonaa siday noocyada file ama waddooyinkiisa asalka ah. Waxaad ka arki kartaa magacooda iyo hubi in ay yihiin waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan. Intaa waxaa dheer, in aad xataa ku eegaan kartaa sawiro laga helay. Dooro faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha ku riday files soo kabsaday dib si aad kaadhka xusuusta PS2 inta ay socoto.
Xusuustaada PS2 sidoo xogta card 1 Fadlan gurmad. Waxaa had iyo jeer aadka u soo jeediyay in ay xogta kaadhka xusuusta PS2 gurmad in your computer in xogta kiiska laga yaabaa in laga badiyo.
2 Wondershare Data Recovery aad bixisaa version tijaabo ah si loo hubiyo in files la ogaado waxa ay yihiin waxa aad doonaysid in aad ka soo kabsado ama aan.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray fayl ka External Hard Drive
Siduu u SD Card Recovery
WD Qaybaha Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado WD Qaybaha Data
Sida loo Barzakh kaarka SD android?
Sidee inuu ka soo kabsado ama tirto faylasha kharribeen gabi ahaanba ka your computer
Sidee ayaan u soo kaban karto, Data ka dib markii masax digsi
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka BlackBerry Playbook
Siduu u Mimoco USB Flash Drive Data Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray JPG Images
> Resource > Ladnaansho > PS2 Memory Card Recovery: kabsado masaxay ama lumay Faylal ay ka PS2 Memory Card